Madaxwaynuhu awood sharci ah ma u leeyahay inuu laalo ama dhimo awoodaha Raysal Wasaaraha? | Hadalsame Media
Home Wararka Madaxwaynuhu awood sharci ah ma u leeyahay inuu laalo ama dhimo awoodaha...
”Markuu arkay tallaabooyinka khilaafsan Dastuurka KMG ah ee uu qaaday Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble sida ku cad Qodobka 87aad, Xarfaha (b) iyo (c) iyo Qodobka 90aad, Xarfaha (b), (c) iyo (e).” ayaa lagu bilaabay qoraal kasoo baxay Madaxtooyada.” ayaa lagu bilaabay War Saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska MW Farmaajo.
Haddaba falanqayn dhinaca sharciga ah ayaa waxaa arrintan ku lafa-guraya garyaqaan Daahir Maxamed Carab oo ah sharciyaqaan ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoo laga duulayo su’aasha ah: Madaxweyne Farmaajo ma hakin karaa awoodaha R/W Rooble?
Previous articleTOOS u daawo: Leicester City vs SSC Napoli, AS Roma vs CSKA Sofia – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleDEG DEG: ”MW ma faragelin karo howlaha RW” – War Saxafadeed jawaab ah oo kasoo baxay Xafiiska RW Rooble